Madaxweyne Ku Xigeenka JSL oo ka qayb galay Xuska Caalamiga ah ee Maalinta Haweenka Adduunka |
Madaxweyne Ku Xigeenka JSL oo ka qayb galay Xuska Caalamiga ah ee Maalinta Haweenka Adduunka
Hargeisa(GNN):-Madaxweyne ku xigeenka JSL Eng Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa caasimadda Hargeysa kaga qayb galay xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Taas oo sanad kasta loo dabaal dego 8 March.
Xafladdaasi waxa kasoo qayb galay safiirka midawga Yurub Ambassador Nicolas Barlenga, xubno kamid ah golaha wasiiradda, Hogaanka Xisbiga Ucid, Agaasime yaal guud, Ururo Caalami ah iyo kuwo maxalli ah, maamulka Jaamacadda Hargeysa Haween iyo dhalinyaro.
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoyska Cabdirashiid Cabdiraxmaan Sh. Ibraahin ayaa in xuska maalinta haweenka adduunka ay u qabteen in la muujiyo kartida iyo dadaalka haweenka ee dhinaca horumarinta dalka iyo sidii looga hadli kahaa caqabadaha haysta haweenka.
Masuuliyiinta ururada Sonsef, Nagaad, NOW, ayaa sheegay inay dumarka reer Somaliland ku suntan yihiin Taariikh wanaagsan wax badana ay qabsadeen isla markaana ay yihiin laf dhabarta qoyska iyo bulshada waxanay soo jeediyeen in kaalinta haweenka kor loo sii qaado.
Safiirka midawga Yurub Ambassador Nicolas barlenga ayaa soo jeediyay in haweenku laga qayb galiyo siyaasadda haday tahay Xisbiyada iyo dawladaha.
Sidoo kale Wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Xirsi, Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe, Wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye, Meeyar ku xigeenka caasimadda Cabdicasiis Maxamed Xaashi, ayaa bogaadiyay guud ahaan haween weynaha Somaliland waxaney tilmaameen inay dumarku yihiin udub dhexaadka bulshada.
Madaxweyne ku xigeenka JSL Eng Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo soo xidhay xafladda loo qabtay xuska maalinta haweenka adduunka ayaa guud ahaan bogaadiyay haween weynaha dalka JSL waxanu tilmaamay inay 8 March tahay maalin qiimo leh. Waxaanu bulshada ku booriyay in cadaalad loo sameeyo haweenka si ay u helaan xuquuq dooda waxa ka dhiman.